/Blog/Masteron Inanthate/I-Masteron Inanthate I-Longer Esebenzayo ne-Androgenic Anabolic Steroid (AAS)
ezaposwa ngomhla 04 / 03 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Masteron Inanthate.
Yonke into nge-Masteron Enanthate
1. Yintoni i-Masteron Enanthate? 2. U-Masteron Unanthate usebenza njani?
3. I-Masteron Yenza i-half half life 4. I-Masteron Inanthate effects
5. Masteron Inanthate vs Propionate 6. I-Masteron Inanthate Cycle
7. Iziphumo ezichaphazelekayo ze-Masteron 8. Thenga i-Masteron Inanthate
9. Iingcebiso ze-Masteron zokuNciphisa 10. I-Masteron Ukunciphisa ixesha lokubona
11. I-Masteron Ukunciphisa ukusetyenziswa kwezobisi
Yintoni i-Masteron Enanthate?
Masteron Inanthate igama lakhe lekhemikhali yi-Drostanolone Inanthate yenye ye-anabolic androgenic steroid (AAS) ukupakisha i-punch xa kuziwa ekubanjeni nasekukhaleni. Yona yinto ehlukileyo yama-Masteron eyaziswa kwi-1950 kwaye ithengiswa phantsi kwamagama amashishini athile kuquka i-Masteril neDrolban.
I-Masteron Inanthate yaziwa ngokubanzi kwii-2000 njengamachiza kunye nokuphucula ukusebenza. Imfuno yayo iye yaphakama yonke indawo, kwaye nanamhlanje ingenye ye-steroids esetyenziswa ngokuqhelekileyo ngenxa yeempawu zayo ezinxamnye ne-anti-estrogenic.
U-Masteron Unanthate usebenza njani?
Usenokuzibuza ukuba le nkunkuma ifanelekileyo isebenza njani. I-Masteron yi-dihydrotestosterone eyenziwe yikomkhulu, kwaye emva kokuba uyisebenzisa, kukho ukwanda kwenani le-DHT emzimbeni.
Kwimizimba yethu, i-5a-iyanciphisa i-enzyme eyenza i-DHT kwi-prostate, izinwele zeentloko, ii-testes, kunye neengqungquthela ze-adrenal ngoko ke kunika amadoda amadoda afana namadoda. Kwamadoda, i-5% yolu vavanyo apho umzimba uvelisa ngokuqhelekileyo uguqulwa kwi-DHT, kwaye oku kuthetha ukuba ukwanda testosterone kukhokelela ekunyuseni kwi-DHT.
I-DHT ayifuni i-aromatize kwaye ke ngoko xa usebenzisa i-Masteron, yandisa i-DHT emzimbeni ngaphandle kokukhokelela ekunyuseni kwi-estrogen. Ngenxa yoko, awuyi kuhlushwa nayiphi na imiphumo ye-estrogen kungakhathaliseki ukuba yiyiphi i-Masteron umlinganiselo oyithandayo ukuthatha.
I-Masteron Enanthate isebenza njenge-aromatase inhibitor eyingcipheko kwaye akumangalisi ukuba isetyenziswe kunyango lomhlaza wesisu. Isebenza ngokuvimbela i-Estrogen kwiindawo zokufumana izicubu zebele.
I-Masteron Yenza i-half half life
Unokuzibuza ukuba ixesha elingakanani i-Masteron Enanthate liyakwazi ukuhlala kwinkqubo yakho. I-Masteron Inyuse ihafu-bomi imihla ye-8-10.
I-Masteron Ukunciphisa ixesha lokubona
Ixesha lokufumana Masteron Inanthate iinyanga ezintathu. Kuthetha ukuba uceba ukuwusebenzisa ngaphambi kokuba uthathe inxaxheba kumncintiswano, ngoko kufuneka uyeke ukuyisebenzisa phambi kweenyanga ezintathu.
I-Masteron Ukunciphisa ukusetyenziswa kwezobisi
Kwiminyaka emininzi, u-Masteron usetyenziswe ukonyango lweengcambu ezingenakulungeleka umdlavuza ochaphazelekayo ochaphazela abafazi be-postmenopausal. I-Masteron ivunyiwe yi-FDA ukunyanga oku, kodwa ngenxa yeendlela ezininzi ezikhoyo namhlanje; ukusetyenziswa kwayo akuthandi njengoko kwakunjalo ngoko.
I-Masteron Inanthate effects
Kwabanye, i-Masteron Enanthate inokuvakala ngathi i-steroid esitsha kwiimarike, kodwa inyaniso yilabo abasetyenzisileyo ukuba bazi ukuba luhle kangakanani. Ngokukodwa, xa kuziwa kumathambo omzimba ovuthayo! Yiyo ingxaki yangempela. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba uya ku ukulahlekelwa ngamanqatha kunye nezihlunu ngexesha elinye. Uya kufumana izihlunu ukuba unaloo nto. Nazi ezinye zeempembelelo ze-Masteron zokunciphisa bonke abantu abazondayo;
Ngaba uye wahamba kwindawo yokuzivocavoca waza waphawula ukuba kukho abantu abangaqeqeshanga nzima njengokuba wenzayo kodwa banezihlunu ezinkulu kunawe? Imfihlelo kukuba ininzi yabo isebenzisa i-steroids engcono yokuphumeza loo nto. Ukuba ukhathele ukuba ube ngumntu onobuhlungu emva koko uthatha i-Masteron Enanthate yindlela yokuhamba.
Nge-Enanthate yeMast, uza kufezekisa ukukhula okukhulu kweemisipha kwaye ufumane ubunzima obusoloko uphuphayo. I-Masteron Inanthate i-472-61-1 ikunika iimpawu ezintle zezinga eliphezulu ezingenanto emfutshane. Isizathu sokuthi oku kungenxa yokuba; Ukugcinwa kwamanzi akukwenzeka ngokusetyenziswa kwe-Masteron Enanthate. Iimisipha zakho ziya kuhlala zigcwele kwaye ziqinileyo, kwaye unokucinga ukuba zingaphi iindumiso ozifumanayo kwiintsapho zakho kunye nabahlobo.
Ukuba unobunzima obunzima, ungatsho ukuba isibuko ngenye yezinto ezimbi kakhulu ongazifuni ukuzifumana. Igumbi lokugqoka lingenye yeendawo ofuna ukuziphepha. Okubi nakakhulu ukuba awunakuze uqiniseke ngawe kunye nanini na umntu ekhangele kuwe, into yokuqala ucinga ukuba ikhangele ioli.
Ngoxa ezi zizathu zezizathu, unokufuna ukunciphisa ubunzima, ukucinywa kwayo kuza neenzuzo ezininzi. Ukulahlekelwa isisindo akusikuncedi nje ukuba ukhange kakhulu kwiingubo zakho, kodwa kunceda impilo yakho ibe ngcono. Uya kuphawula ukuba xa unesisindo esininzi kunokuba ufanele ubenakho, intlungu ebuhlungu iyakuba ngumyalelo wosuku. Kukho izimo zempilo ezinzima kakhulu ezinokuthi ziphuhlise njengohlobo lwe-2 yeswekile.
Ngethamsanqa, ukuchitha isisindo esithe xaxa kuyinqanaba elide. I-Masteron Inanthate yindlela eqinisekisiweyo nefanelekileyo yokujongana nobunzima obunzima. Yisisitshixo sokulahlekelwa ubunzima obunzima kwaye ngokungangabazeki enye ye-steroids ethandwa kakhulu abantu abafunga ngabo ngokutshisa iioli. Abo bawusebenzise bayakwazi ukuvuma ukuba lenza kube lula. Thatha namhlanje kwaye ufezekise zonke iinjongo zomzimba ozinzile. Kungcono, ufumane amava enempilo kunye nokwandiswa kobomi bakho iminyaka emininzi ngenxa yokusebenzisa i-Masteron Enanthate.
Ngubani ongathandi ukuba nengalo enkulu ebonisa nge-t shirt? Usukela nje ukuhamba, kwaye abantu bafuna ukuyifakraza ukuqinisekisa ukuba yinyani. Inhlonipho oyifumana kuyo yonke into yinto enye ekwazisa ukuba ukhululekile.
Ukuba ufuna ukukhupha, uphakamileyo I-Drostanolone Inanthate i-dosage iya kunceda ngaloo nto. Kwakhona, ukongeza kwi-stack yakho yokubamba kunceda ukunciphisa imiphumo ye-estrogen engabangela ezinye i-steroids. I-Masteron Inanthate effect bulking effect ayinakunceda, kodwa inzuzo yayo kukuba iyigxina. Impembelelo ye-Masteron Inanthate bulking ayiphumelelanga ngenxa yokugcinwa kwamanzi, kodwa kunokuba kungenxa yokunyuka kwe testosterone yamahhala.
Ubuninzi bemisipha yakho nokho kugqityiwe kwirejimenti yakho yokutya kunye nokutya kwakho. Qinisekisa ukuba i-regimen yakho yokuzilolonga iyahamba ngokubambisana nenjongo yakho yokukhwela.
Ukuqhawula ngokuqhelekileyo kuyaqhelana nabaqulunqa umzimba kuba kuthetha ukuba uya kujonga. Xa ufuna ukusika, injongo yakho ephambili kukunciphisa amanqamzana omzimba ngelixa uqhubeka nokugcina ubunzima bomzimba. Ngamanye amaxesha i-abs ihlala khona, kodwa ingafihlakelwa ngamanqatha. Ukubonakalisa izihlunu ngaphantsi, kufuneka wenze umjikelezo wokusika kwaye ngexesha elifanayo uqinisekise ukuba awulahlekelwa yimisipha eye ithathe umzamo omkhulu wokwakha. Ngoko xa usika, kufuneka ukwenze ngokuchanekileyo.
Emva kokusika, umzimba wakho uhamba kwaye uchazwe ngakumbi. Emva kokuba uxhomekeke, uya kuvuyela indlela evelele ngayo inzuzo ye-Drostanolone Enanthate. Ngokuqhelekileyo, abaninzi abaqulunqa umzimba baqulunqa imizimba yabo kwiiveki ezilishumi elinambini ukuya kwezilishumi elinesibhozo. Iintlawulo ze-Enanthate ezininzi zibonakala kwiiveki ezintandathu.
Ngako oko amaninzi amaninzi omzimba sele esetyenziswe, kwaye i-Masteron Inanthate (472-61-1) unceda ukususa amanqatha anenkani. I-Masteron Inanthate ngaphambi kokuba emva kokusahluko oza kuphawula emva kokuba umjikelezo wokusika uza kukumangazela. Uya kuba nomfanekiso onobuhle, omhle osoloko uphupha ngawo.
Masteron Inanthate vs Propionate
Masteron Inanthate kwaye Masteron Propionate zombini i-androgenic / anabolic steroids eyiluncedo ekwakheni umzimba. Musa ukukhohliswa ngamagama abo ukucinga ukuba ezi zimbini zifana; bahluke.
I-Masteron Propionate kunye nomlinganiselo wokunciphisa isenzo sehluke. I-Masteron Propionate i-anabolic steroid esebenza ngokukhawuleza ngelixa i-Masteron Inanthate ihluke. Nge-Masteron Propionate, unokubona utshintsho kwimpilo yakho kwiiveki zokuqala ezintathu ngelixa u-Masteron Unanthate, kunokuthabatha ngaphezulu kweeveki ezintandathu ukuze ubone utshintsho.
I-Masterone Inanthate yinto ede ester, kwaye oku kuthetha ukuba ngexesha lokujova, kufuneka ujobe ngezantsi. Ngakolunye uhlangothi, i-Masterone Propionate i-ester emfutshane esoloko ijojowe yonke imihla okanye yonke imihla. Abantu abane-injection phobia bakhetha ukusebenzisa i-Masteron Enanthate. I-Masteron Propionate isilinganiselo ngokuqhelekileyo i-50-150mg / ml ngelixa i-Enanthate yi-200mg / ml.
I-Masteron Propionate ngokubhekiselele kwi-half-life-life has a difference difference too. I-Masteron Inyanzelisa ubuncinane beentsuku iintsuku ezilishumi ngelixa i-Masteron Propionate yimihla ye-2.5. Abasebenzisi be-Masteron Propionate bayifake kunye namanye ama-esters amfutshane njengoTestonsterone Propionate, i-Trenbolone Acetate okanye iNPP (i-Nandrolone Phenylpropionate). Ngakolunye uhlangothi, ii-steroids ezide zihlala zihambelana ne-Masteron Enanthate. Basenokuba yiC deca Durabolin, i-Trenbolone Enanthate, i-Testosterone Inanthate okanye iCypionate.
I-Masteron Inanthate ifinyelela kumanqanaba okuphakama emzimbeni ngokuthe kancinane xa kuthelekiswa nePropionate. Ngenxa yoko, kuthatha ixesha elongezelelweyo ukususa kwinkqubo yomntu. Ukubuyisela ekusebenziseni kwayo kuyanciphisa ngokuthelekiswa neleyo ye-Masteron Propionate. Oku kungenxa yokuba i-HPTA yomzimba ifunyanwa kuphela emva kokuba i-steroids icacile ngokupheleleyo kwinkqubo yakho.
Ixesha lokufumanisa i-Masteron Propionate iiveki ezintathu ngelixa i-Unanthate iinyanga ezintathu. Ngokubhekiselele kumjikelezo, umjikelo we-Masteron wokunciphisa umzimba udla ngokude uqhathaniswa nowe-Masteron Propionate. Umjikelezo we-Masteron Propionate uthatha iiveki ezingaphantsi kweesibhozo ngelixa i-enanthate ithatha ngaphezu koko.
Ngoxa kuthelekisa i-Masteron Prop ne-Enanthate, abaninzi ababuciko bemizimba bathi banika iziphumo ezifanayo ngelixa abanye bakhetha ukuxhaswa kwi-Propionate.
I-Masteron Inanthate Cycle
Ngethuba usebenzisa i-Masteron Enanthate, umlinganiselo we-400-600 mg ngeveki ukwanele ukukunika imiphumo oyifunayo. Amanani ahlukaniswa kabini kwaye ajojowe kabini ngeveki. Kuthetha ukuba i-injection yakho yokuqala yeveki iya kuba yi-200-300mg ngelixa isibini iya kuba yi-200-300mg.
Kwimizuzu yokuqala, i-Masteron yokuQinisa isiXhosa ingathatha iiveki ezintandathu ukuya kweebhozo. Abo baqhubele phambili banomjikelezo weeveki ze-6-10 ngelixa ezinye zihamba ukuya kwiiveki ezilishumi elinesithandathu.
Ukongeza i-Masteron ukuvavanya umjikelo Kunconywa ngokuba uVavanyo lunikela inani elifunekayo kakhulu le hormone ekhutshelwe umveliso. Ngenxa yoko, umzimba ungasebenza ngokuqhelekileyo.
Umjikelo wesiqalo unomlinganiselo we-Masteron Enanthate we-400mg kunye ne-300-500mg ye-Testosterone Enanthate.
Xa usebenzisa enye i-steroid, a PCT kubaluleke kakhulu. Inceda umzimba uphinde ufike ngokukhawuleza. Kwimeko yethu, i-Masteron Enanthate ayifuni i-aromatize; ngenxa yoko awuyi kuhlupheka ngenxa yeempembelelo zesigxina se-estrogenic. Ukusebenzisa i-Nolvadex kuya kwanele ngexesha le-PCT yakho.
Xa uthe wafaka i-Masteron Inyanzelisa kunye kunye ne-aromatizing compounds ezinamandla kakhulu, ngoko kukho imfuneko yokuthatha i-inhibitor ene-aromatase eqinile njengoAromasin, Letrozole okanye iArimidex. Ukungaphumeleli ukusebenzisa i-aromatase inhibitor kunokukwenza uhlupheke kwi-gynecomastia.
Iziphumo ezichaphazelekayo ze-Masteron
Lindela ukuba uxhomekeke kwimiphumo emibi ukuba ukhona nasiphi na iziyobisi. Into ebalulekileyo yinkxalabo. Kukho njalo unakho ukufuna ukupakisha kwiimisipha kodwa ungaqinisekanga ukuba impilo yakho iya kuba yingozi. Iindaba ezilungileyo yi-Masteron Enanthate ikuvumela ukuba uvune zonke izityalo ngaphandle kokuphazamisa impilo yakho. Ngenye yezona zinto ezilungileyo kakhulu ngenxa yeempembelelo ze-Masteron azikho ezininzi.
Kwamadoda, le anabolic steroid iyanyamezeleka, kwaye akunakwenzeka ukuba bahlupheke kuyo nayiphi na imiphumela emibi yecala le-Masteron. Kula mabhinqa, i-Masteron isisombululo esincinci sinconywa kuba umntu ophezulu ungabangela ukuba bahlupheke kwi-virilization.
Uninzi lweempembelelo ze-Drostanolone ze-Enanthate ze-androgenic. Zingaquka iinwele zomzimba ezingafunekiyo, ukulahleka kweenwele kunye ne-acne. Ezi Iziphumo ezichaphazelekayo ze-Masteron Akunakwenzeka ukuba abe nzima, kodwa ayenokwenzeka xa umsebenzisi ephezulu kwi-Masteron dosage. Amadoda anembali yezofuzo ezinokubaluleka kakhulu banokuhlupheka ngenxa yokulahleka kweenwele.
Kula mabhinqa, iimpawu zezilwanyana ezinokuthi zize zenzeke zizinwele ezingafunekiyo zomzimba, i-clitoris eyandisiweyo, kunye nezwi elijonge. Abafazi banxuswa ukuba basebenzise iDostanolone Enanthate ngokucokisekileyo kwaye bahlale behlola iimpawu zokuhlaziywa ezingabonakalisa. Abanye bangabonisa ububele obuninzi kwi-Masteron Enanthate; ngenxa yoko iziphumo ezichaphazelekayo ze-Drostanolone ze-Enanthate ziya kuba ziqheleke kubo. Yeka ukusetyenziswa xa ubona nayiphi na impawu zempilo.
Kukho ukunyuka kwe-cholesterol embi kunye nokunciphisa i-cholesterol enhle. Kukho iingxelo malunga noshintsho kwixinzelelo legazi, kodwa oku kwenzeka ngokungafaneki.
Kusenokubakho ukukhutshwa kwe-testosterone yemvelo emzimbeni. Ibuyela kwakhona kwisiqhelo xa usuqedile usebenzisa isiza. Ukuba ufuna ukubeka isantya apho uveliso lwe testosterone lubuyela kwinto eqhelekileyo, ngoko kufuneka wenze i-Post Cycle Therapy emva kokuba uyenze nge-cycleon ye-Masteron.
Thenga i-Masteron Inanthate
Phantse wonke umenzi womzimba, umdlali okanye umzekelo namhlanje udla Steroid namhlanje. Kungenzeka ukuba kukufumanisa izihlunu, ukusika okanye ukufumana amandla. Ngaba uzibuze apho zithenga iimveliso zazo?
Xa kuziwa ekuthengeni i-Masteron Enanthate, unokuyithenga kwi-intanethi okanye kwivenkile. Ngelishwa, le steroid engafumaneki kalula. Endaweni yokuhamba ukusuka kwisitoreji ukugcina ukukhangela, unokukhetha ukuyithenga kwi-intanethi. Ngale ndlela, uya kuphepha ukuchitha ixesha kunye nemali oyisebenzisayo ukuhamba ukusuka kwindawo eya kwindawo.
Ukuba ugqiba ukuwuthenga nge-intanethi, kukho ezininzi izinto omele uzenzele ingqalelo ukuqinisekisa ukuba imali yakho ayiyi kuhlaselwa kwakhona, ukuqinisekisa ukuba uthenge umgangatho we-Drostanolone Enanthate. Ngomkhiqizo omhle, unokuqiniseka ukuba uza kufezekisa iziphumo eziphambili zexesha elide.
Into yokuqala oya kuyibona kukuba iindawo ezininzi zinikela ukuthengisa i-Masteron Enanthate, kodwa akuyiyo yonke into ekuthengisayo into efanelekileyo. Kufuneka ufumane inkampani ekhompyutheni enithembele kuyo. Ukufumana enye iya kukunika uxolo lwengqondo ukwazi ukuba awuyi kuhlaselwa. Kwakhona, awuyi kuba nexhala lokuba umkhiqizo unokuchaphazela impilo yakho. Uyazi njani ukuba isayithi linokuthenjwa?
Yiya kwisayithi enika ulwazi oluninzi malunga nabo kunye nemveliso yabo. Kubalulekile ukuba uyazi indawo yabo, oonxibelelwano kunye nemveliso abayinikezelayo ukuze bagweme ukuhlaselwa.
Funda ingxelo evela kubantu abathengile iimveliso kwiinkampani. Ukuphononongwa okulungileyo kuthetha ukuba ufumana isiqinisekiso sokuthi uthenga inkampani ehloniphekileyo.
Gwema ukukhwela kwi-intanethi. Uyazi ukuba izinto ezincinci zibiza kwaye awufuni ukuthengisa impilo yakho ngemali. Uninzi lwewebhu lewebhu luza kunika iimveliso zabo ngamanani ahlaselekileyo ukuze banokukhanga abathengi abaninzi. Njalo uyazi ukuba izaphulelo ezikratshi ziyi-fishy kwaye kufuneka, ngoko, khangela i-website enika amaxabiso angokoqobo. Ngokwenza oku, unokuqiniseka ukuba uza kufumana iimveliso ezingayi kubeka impilo yakho engozini.
Iingcebiso ze-Masteron zokuNciphisa
UAi uthi, "Ukuba unemiba enzima, uyayiqonda indlela ezibuhlungu ngayo. Uvuka, jonga ngokwakho, kwaye kubonakala ngathi ubeka ubunzima bomhla ngemihla. Ukongezelela, awukwazi ukuba wenzeni. Kulo mzuzwana, uzame iitoni zeemveliso kwishidi lokulahlekelwa ubunzima kodwa emva kweenyanga zokusetyenziswa, awukho ndawo kufuphi nomgomo wakho. Uqala ukuyeka, kwaye ukhetho olulodwa olukuyo ukuba uwamkele. Ndaye ndaza ndithemba Masteron Inanthate incedise ukuba ndiphalaze konke ubunzima obunzima. Ndayisebenzisa iinyanga ezintathu kwaye konke endikuthiyo kukuba kukufanelekile. Okwangoku ndilahlekelwe iikhilogram ezingaphezu kweekhilogram ezingamashumi amathathu kwaye ndihleli emva ndijonga emva kwindleko yam yokulahlekelwa kwesisindo; Ndiyathanda ukuba ndiyazi ngo-Masteron ngaphambili. Ukuba unomuzwa wokuthi umzimba wakho udinga uthando olongezelelweyo, ke le yilona mveliso engcono kakhulu.
U-Nianzu uthi, "Ndiye ndazama iinzuzo ezincinci kodwa zibonakala zibabetha bonke. Bonke abanye bandinika izihlunu ezinkulu ezahamba ngexesha elifutshane kungakhathaliseki ukuba ndenzeni ukuzama nokuzilondoloza. Ukuthetha ngokugcina amanzi! Xa ndondliwa kunye nabo, ndaqala ukuthenga i-steroid engcono, eya kuthi ndizuze unomphela. Ekugqibeleni ndifumene i-AASraw kunye nokuthenga i-Masteron Enanthate. Le mveliso isitshintshe ngokupheleleyo. Iimisipha zam zanda kakhulu ngobukhulu. Ziyinkimbinkimbi kwaye zichazwe ngokucacileyo, kwaye azibonakali ukuba zihambe nangemva kokuyeka ukusetyenziswa kwayo. Ndiyakholwa ngokwenene ukuba i-Masteron Inanthate yiyona ndlela iphezulu ye-steroid ukuba ufuna iziphumo ezimangalisayo ezingayi kutshabalalisa emva kwexesha elithile. "
UFang uthi, "Esi sisichengisiso esisebenza ngokungahambi kakuhle xa kuziwa ekuhleni. Ndihlala ndithanda ukuba nomzimba omkhulu, kwaye xa ndagqiba ekubeni nomjikelezo wokusika, andizange ndiqiniseke ukuba kwakungcono kum. Ngethamsanqa, ngokucetyiswa kwabahlobo bam kwi-gym ndahlala kwi-Dronostalone Enanthate. Ndiphantse kuhamba nomjikelezo, kwaye ndikhangeleka ngokumangalisayo. Andinakulindela ukuba ndibone umphumo. Ukhangele ukuguqula umzimba wakho? Masteron Inanthate. Kufaneleke nganye ngemali enye. "
Uthi lam uthi, "Ndileveki yam yesixhenxe kude kube kude, kwaye ndihlala ndixhomekeke kwaye ngelo xesha ndenza i-muscle inzuzo eya kundinceda kumncintiswano wam ebhasini kwinyanga ezayo. Ngokuphathelele ii-injections, azibuhlungu kwaye sele sele zizisebenzise. Andizange ndihlupheke kwi-jitters okanye kwimiphumo emibi ngoku. Umzimba wam ukanti utshintshe ngokuphawulekayo. Ndenze izugu elikhulu kwaye umzimba wam uncike kwakhona. Ndiqinisekile kakhulu ngolu khuphiswano, kwaye ndiyazi ukuba ndiza kukubonga amanqaku amaninzi ngenxa yobuchule be-Masteron Enanthate (472-61-1).
U-Chenric uthi, "Amandla kunye nokunyamezela kwam sele sele emva kokusebenzisa le steroid ngeveki ezimbalwa. Ndandincinci xa ndawutyala ukusuka e-AASraw, kodwa udadewethu wandixelela ukuba bathengisa iimveliso eziphezulu. Enyanisweni ilizwi lakhe ndiphumelele ngaphezu koko ndicinga ukuba ndinako. Ezi zinto zigqitywe nje! Ndacinga ukuba utshintsho kuphela ndibonayo lwenguqu kumzimba wam. Ngaphandle kwamamisipha am, ukuqina kwam kwandisa kakhulu. Namhlanje, ndinako ukubeka ngaphezulu ngexesha lokuzivocavoca. Andiyithandi, kwaye ndiyakwazi ukuqeqesha imihla ngemihla. Ndiza kubuya ngokukhawuleza, kwaye ngoku ndiyakwazi ukusebenza ekuseni kwaye ndihambe emsebenzini ngokukhawuleza. Ndafumana iinkonzo ezintle ezivela kwi-AASraw! Khuthaza ngenkuthalo!
I-Metabolism ye-Anabolic-Androgenic Steroids, uVictor A. Rogozkin, iphepha 1-19
Inkcazelo yeDrugs: Data Data, Structures kunye .., ehlelwe nguJ. Elks
I-Masteron (i-Drostanolone propionate) Imiphumo, Isisindo, Imiphumo emibi I-Boldenone Undecylenate: I-8 I-Outoid Effects Effects Uya Kufuna Ukuyiphepha